Imtixaankii Heer-qaran Ee Fasalka 10aad Oo Si Rasmi Ah U Bilawday - Cakaara News
Imtixaankii Heer-qaran Ee Fasalka 10aad Oo Si Rasmi Ah U Bilawday
Jigjiga( cakaaranews ) Arbaco 25ka May 2016. Inkasta oo uu Imtixaanka heer-qaran ee fasalka 10 aad uu maanta si iskumid ah uu uga wada bilawday dhamaan dalka JDFI ayaa sidookale 128 goobood oo ah DDSI uu si rasmi ah uga bilawday imtixaanka fasalka 10 aad. kaas ooy maanta u fadhiisteen imtixaanka arday tiradoodu ka badan tahay 16,400 oo arday.
Hadaba Gadhwadeenka/ GS/ Horumarinta Manhajka iyo Imtixaanaadka mudane Cabdulaahi Idiriis Cilmi oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in jawi wanaagsan uu imtixaankii fasalka10 aad ku bilawday maanta iyadoo dhamaan goobihii imtixaanku ka dhacayayna uu si iskumid ah uga bilawday. Wuxuuna intaa kudaray masuulku in imtixaanka fasalka 10aad ay qaadanayso arday tiradoodu dhantahay 16,400 kuwaasoo 11,143 ay yihiin lab meesha 5300 ay yihiin dhadig.
Ugu danbayna wuxuu xusay masuulku in 3 cisho uu soconayo imtixaanka fasalka 10aad kadibna la bilaabi doono imtixaanka heer-qaran ee fasalka 12aad kaasoo iyana dhici doona 4 cisho kadib islamarkaana ay u fadhiisan doonaan imtixaanka 12aadka arday tiradoodu kor u dhaafayso 8254 arday.